Aleksander Ceferin ny tantaran'ny ankizy momba ny tantaram-piainana tsy hita isa
Home ELITE FOOTBOLA Aleksander Ceferin ny tantaran'ny ankizy momba ny tantaram-piainana tsy hita isa
Ny LB dia manolotra ny tantara feno momba ny Elite Football iray izay fantatra indrindra "The Manager Managed". Ny Aleksander Ceferin tantaran-tantaran'olon-droa miaraka amin'ny tantaram-piainan'ny tantaram-piainan'ny tsy fantatra dia mitondra fitantarana feno momba ireo zava-nitranga voamarikao nanomboka tamin'ny fahazazany hatramin'izao. Ny famakafakana dia ny tantaram-pianakaviana, ny tantaram-piainana talohan'ny laza, ny fiantsoana tantara, ny fifandraisana ary ny fiainana manokana
Eny, fantatry ny rehetra fa nipoitra avy amin'ny tsy fahampian'ny havany izy ka lasa lehilahy mahery indrindra amin'ny baolina kitra. Na izany aza, vitsivitsy ihany no mandinika ny tantaran'i Aleksander Ceferin izay tena mahaliana. Ankehitriny tsy misy ado, alefaso.
Aleksander Ceferin tantaram-pitiavana bebe kokoa nohavaozina Biography Facts- Ny fiainan'ny taloha sy ny fianakaviana
Aleksander Ceferin dia teraka tamin'ny andro 13th of October 1967 tao Ljubljana ao Slovenia. Izy no zanaka faharoa sy faralahy naterak'i Ana (renim-pianakaviana) ary i Peter rainy (mpisolovava fanta-daza).
Nipoitra tao Ljubljana (tanàna niaviany) niaraka tamin'i Rok zokiny lahy, Aleksander dia zanaka matanjaka sy mafy loha izay naneho ny toetra amam-panekena ho amin'ny adidy, zavatra iray nampahafantarin'ny rainy an'i Peter toy izao manaraka izao:
"Aleksandria efatra monja no nandeha niaraka tamin'ny alika. Naniry ny handositra any an-trano ilay alika, i Aleksander kely dia tsy nandefasany nandeha, nitarika azy tamin'ny alàlan'ny alika ny alika, fa i Alexander kosa nitazona ny làlan-dry zareo ary notaritina nankany an-trano "
Ankoatra ireo famantarana mialoha ny fanoloran-tena, i Aleksander tanora dia nahalala fa tsara ny mamaha ny olana manelingelina azy sy ny zokiny Rok, izay toetra iray izay nahatsiarovana ity farany dia nampiasaina tsara tamin'ny fandresena azy ireo ny fahalalahan'ny fanapahan-kevitry ny ray aman-dreniny hanery Music on the duo.
"Tian 'ny ray aman-dreninay ny hahafantaranay ny fomba hanaovana milina. Nifidy ny fiaraha-miombon'antoka izy ireo, saingy nankahalantsika izany tamin'ny voalohany. Tao anatin'ireo ora fampiharana dia tsy nampiseho talenta na mozika mozika izahay tamin'ny fampiofanana. Nandritra ny volana maromaro dia nanahirana ny ray aman-dreninay sy ny tsy fahafalian'ny mpampianatra mozika ".
Nahatsiaro an'i Rok.
Fantatr'i Aleksander anefa ny fomba hamahantsika an'ilay olana. Nanolo-kevitra ny hivarotantsika ny fiarahan'ny accordion ny vola. Izany no nataonay tamim-pahatokisana. Nahita ny reninay tatỳ aoriana fa tsy hita ilay fitaovana fa tsy nanelingelina. Raha ny marina, ny trano dia mirindra kokoa raha tsy misy ny fitaovana mahazatra.
Faranany ny famaranana.
Aleksander Ceferin tantaram-pitiavana bebe kokoa nohavaozina Biography Facts- Fanabeazana sy fanabeazana
Aleksander dia nanana ny fianarany fototra tao amin'ny sekoly fanabeazana fototra tao Grosuplje izay toerana niasan'ny reniny tamin'izany fotoana izany. Fony izy tany am-pianarana, dia mpianatra izy izay tsy nianatra na inona na inona tamin'ny fianarana ary nahatonga fanakianana tamin'ny mpianatra hafa. Na dia izany aza, ny reniny (asongadiny miaraka aminy) dia nanana toerana mafonja ho azy ary tsy nijery ny fahadisoany.
Rehefa nifarana ny fotoam-pianarana, dia nilalao baolina kitra niaraka tamin'ny namany i Aleksander, ary nanampy tamin'ny faha-15 taonany. Ankoatra izany, mpanohana azy izy Hajduk Split, izay iray amin'ireo ekipa tsara indrindra tao Yugoslavia teo aloha tamin'izany fotoana izany.
Rehefa vita ny sekoly ambaratonga voalohany dia nanonofy ny ho lasa tantsaha i Aleksander, fa kosa izy dia niditra tao amin'ny Gymnasiums izay nahazoany fianarana ambaratonga faharoa. Voalohany dia i Gimnazija tao Sticno talohan'ny nandehanany Poljana Gymnasium ao Ljubljana.
Aleksander Ceferin tantaram-pitiavana bebe kokoa nohavaozina Biography Facts- Road To Fame
1991 no taona nananan'i Aleksander hianatra momba ny lalàna ao amin'ny University of Ljubljana. Na dia teo aza izany, izy dia nanaja ny hevitry ny Ombudsman an'ny Zon'olombelona, ​​fikarohana izay fantatry ny firenena Scandinavian tamin'izany fotoana izany ihany.
Ho an'i Aleksander, dia lava sy haingana ny làlana nalaza taorian'ny fizarana diplaoma. Izy aloha dia nanatevin-daharana ny orinasam-pianaran'ny fianakaviany izay tarihan'i Peter rainy ary nahaliana ny fisehoana mpilalao ara-panatanjahantena sy atleta matihanina.
Ny asan'ny fampisehoana ara-dalàna dia nahita fa ny tombotsoany ara-dalàna sy ny anjara asany amin'ny iray amin'ireo klioban'ny mpankafy futsal iray malaza indrindra ao Slovenia, KMN Svea Lesna Litija ary ny amperin'asa FC Ljubljana, eo anelanelan'ny 2005-2011.
Aleksander Ceferin tantaram-pitiavana bebe kokoa nohavaozina Biography Facts- Mitsangàna mba haka izany
Ny onjam-peo dia nanomboka nanangana an'i 2011 rehefa voafidy ho filoham-pirenena Football (Slovenia) an'ny filohan'i Slovenia (NZS) i Aleksander ao amin'ny 2011, andraikitra izay nahomby tamin'ny fitondrany vice-second sy fahatelo ho filohan'ny Kaomity Legal UEFA avy amin'ny 2011 ho 2016.
Farany dia nipoitra avy amin'ny tsy fahampian'ny havany taorian'ny fifidianana azy ho filoham-pirenena fahafito tao amin'ny 12th UEFA Congress Extraordinary ao Athens tamin'ny volana septambra 2016 ary dia lasa filoha lefitry ny FIFA manerantany. Ny ambiny, araka ny filazany, dia tantara.
Aleksander Ceferin tantaram-pitiavana bebe kokoa nohavaozina Biography Facts- Relationship Life
Efa ela ny vadin'i Aleksander no nanambady an'i Barbara Ceferin vadiny. Ireo mpivady voalohany nihaona izy ireo rehefa nanatrika ny fampakaram-bady azy ireo namana ary nanomboka nifankatia taorian'izany. Nifanambadian'izy ireo tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny 1999 ary nanambady hatramin'izao.
Ilaina ny manamarika fa mpaka sary mpaka sary i Barbara ary manana ny sariny misy sary sy boky ho an'ny tenany manokana. izy dia tsy mitsahatra ny mankasitraka ny vadiny izay lazainy amin'ireto fomba manaraka ireto:
"Tena be fitiavana, mendri-piderana, miaro tena izy, toy ny tsy maintsy ataon'ny lehilahy. Na dia mety henjana indraindray aza izy, tsy maintsy miaiky aho fa manana fanahy malemy izy izay tiako. "
Ny fanambadiana Barbara sy Aleksander dia nahazo zanaka telo. ao anatiny Nina (born 1993), Neza (teraka 2002) ary Anait (born 2005).
Aleksander Ceferin tantaram-pitiavana bebe kokoa nohavaozina Biography Facts- Fantatrao ve?
Aleksander dia niampita ny onja Sahara in-efatra tamin'ny fiara ary indray mandeha amin'ny môtô
Izy dia voatendry hiady amin'ny fantatra amin'ny hoe Ady folo andro Na izany aza, dia nifarana ilay ady raha vao nahita asa izy.
Miresaka momba ny fahaverezam-pahefana, i Aleksander dia manana fehiloha mainty hoditra ao karate
Ankoatra ny fiteny Slovaky, Aleksander dia mahay miteny Anglisy sy Italiana,
Tia alika izy ary manana alika telo ho an'ny zanany vavy.
Aleksander Ceferin tantaram-pitiavana bebe kokoa nohavaozina Biography Facts- Ny fiainan'ny tena manokana
Aleksander dia lehilahy mafana fo izay manana herimpo amin'ny finoany amin'ny zavatra rehetra ataony. Ankoatr'io endri-tsoratra io dia ny fahaiza-manaony manokana eo amin'ny fiaraha-monina, ny fahatsarany ny rariny, ny faharetana, ny fifantohana, ary ny fanoloran-tena tafahoatra amin'ny fianakaviany.
MIEZAHA HAHAY: Misaotra noho ny famakiana ny tantaranay Aleksander Ceferin momba ny tantaram-pahaterahana sy ny tantaram-piainana tsy fantatra. amin'ny LifeBogger, Miezaka izahay mba hanana ny marina sy ny rariny. Raha mahita zavatra izay tsy mety, dia zarao aminay ny fanehoan-kevitra eto ambany. Hanome voninahitra sy hanaja ny hevitrao foana izahay.